Nyowani beta 2 shanduro dzevanogadzira watchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 | Ndinobva mac
Apple ichangoburitsa vhezheni beta 2 yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 vagadziri. Uye zvakare, yakaburitsa beta 2 vhezheni yeIOS 11.4 saka yega vhezheni yatisati tavhura ndeyeyeedu anodikanwa macOS. Mupfungwa iyi, isu tine chokwadi chekuti mangwana richava zuva rekuburitswa kwayo.
Kana zviri zve beta 2 shanduro isu tinogona kuona shanduko yakanangiswa yakanangana nekushanda kwesystem, kugadzirisa mukuita uye kugadzirisa mukugadzikana. Ichokwadi kuti vamwe vashandisi vari kusangana nematambudziko neiyo yepamutemo vhezheni yeWOSOS 4, saka tinovimba izvozvo idzi shanduro nyowani dzinogadzirisa mabugs.
ari bugs mune yazvino vhezheni zvine hukama zvakananga nekutangazve chishandiso, Zvinoita sekunge nekuda kwechimwe chikonzero iyo Apple Watch haitangi kana vadzimwa nebhatiri uye ndinofanira kuitangazve pamaoko. Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika kwandiri Svondo ino mushure mekunge yangu Apple Watch Series 0 yapera bhatiri. Kuti utange zvekare nekutsikirira mabhatani ese panguva imwe chete zvakaringana, asi idambudziko iro vamwe vashandisi vari kusangana naro uye tinotarisira kuti Apple ichaagadzirisa mushanduro dzinouya.
Nezve iyo tvOS vhezheni, isu hatine shanduko huru tichienzanisa neyemberi beta, saka isu tine chokwadi chekuti kunatsiridzwa kune hukama zvakare nekushanda uye kugadzikana kwesisitimu. Isu tichave takateerera kune vanogadzira kuti tione kana idzi shanduro nyowani dzichiwedzera nhau dzakakosha uye kana zvirizvo, isu ticha taura nezvadzo mune ino chinyorwa kana kugadzira nyowani. Rangarira kuti idzi beta shanduro dzinogona kuunza bugs uye zvirinani kugara kunze kwavo kana isu tisiri vagadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani beta 2 kuburitswa yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 vagadziri
AMD Radeon RX 580 eGPU inopa kanopfuura kaviri kumhanya kweMacBook Pro